नाम मिलेका कारण बर्षा राउतको ठाउँमा बर्षा शिवकोटीलाई गाली - StarPratika.com
नाम मिलेका कारण बर्षा राउतको ठाउँमा बर्षा शिवकोटीलाई गाली
काठमाडौ । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले इदको शुभकामना दिएकोमा सामाजिक सञ्जालमा एकजना सामाजिक सञ्जालकर्ताले मान्छे नचिनी कमेन्ट गरेकाले मान्छे चिनेर कमेन्ट गर्न आग्रह गरेकी छन् । बर्षा राउतको विरोध भइरहदा ति सामाजिक सञ्जालकर्ताले बर्षा शिवाकाटीलाई ‘ तपाईलाई देशको भन्दा बढि चिन्ता भारतिय साथीहरुको लाग्दो रहेछ त , सोच परिवर्तन गर्नुस्’ भनेपछि उनले मान्छे चिनेर कमेन्ट गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
त्यस पछि उनले तत्कालै अर्को तस्विर फोष्ट गरिन र आफूलाई मेसेज पठाउन र कमेन्ट गर्नुअघि नाम र थर हेरिदिन आग्रह गरिन् । उनले सोमबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टबाट यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘नमस्ते म वर्षा सिवाकोटी, धन्यवाद ! मेसेज पठाउनु र कमेन्ट गर्नुअघि नाम थर हेर्ने कष्ट गरिदिनु होला ।’ उनको यो पोस्टमा धेरैले कमेन्ट गरेका छन् । नाम मिलेका कारण बर्षा राउतको ठाउँमा बर्षा शिवकोटीलाई गाली आएको हो । ति सामाजिक सञ्जाल कर्ताले नामै नचिनि कमेन्ट गरेका कारण आफुलाई चिनाउन बर्षा शिवाकोटीलाई गारो परेका देखियो ।
नमस्ते म “ BARSHA SIWAKOTI “ 🙏🏻 धन्यवाद !!( मेसेज पठाउनु र कमेन्ट गर्नु अघि नाम थर हेर्ने कष्ट गरिदिनु होला)
Posted by Barsha Siwakoti on Monday, 25 May 2020
प्रकाशित मिति : 2020-05-25
तिजगीत “कार किन्देउ किन्ने भा” सार्वजनिक